“Sida Gabadh Weynaatay Ayuu U Baroortay” – Paul Scholes Oo
By axadle Last updated Jun 2, 2020
Xiddigii hore ee Manchester United ee Paul Scholes ayaa dib u xasuustay sannadkii 1999kii oo ay kooxdiisu ku guuleysatay tartanka Champions League, laakiin isaga lagu riday ganaax markii uu taako ku qabtay tababaraha hadda ee xulka qaranka France ee Didier Deschamps oo waqtigaas u ciyaaryay Juventus.
Scholes iyo Roy Keane ayaa seegay ciyaartii finalka ee Bayern Munich maadaama kaadh ay qaateen kulankii semi-finalka ee ay Juventus guusha kaga soo gaadheen, waxaana uu wali rumaysan yahay Scholes in aanu u qalmaynin kaadhka sababta u noqday inuu finalka.
Laacibkan hore ee khadka dhexe ayaa taakal ku qabtay halyeygii khadka dhexe ee Juventus ee Deschamps qaybtii dambe oo sii dhamaanaysa, waxaana si fudud dhulka iskugu tuuray Deschamps oo qaylinaya si uu garsooraha ugu riixo inuu kaadh siiyo Scholes.
Paul Scholes ayaa 21 sannadood kaddib daaha ka rogay arrintii, waxaanu xusay sida uu wali calool-xumada ugu hayo Deschamps, waxaanu yidhi: “Kaliya waa inaad la tacaasho, miyaanay ahayn. Waa la igu gefay waqtigaas, waxna maan samayn karaynin.
“Waxaan taako ku qabtay Deschamps, waxaanan hore u arkay marar kooban, uma malaynayo inay ahayd qalad haddii aan si daacad ah u hadlo.
“Waxaanu ku beegnayn garsooraha hortiisa, wuxuu u cabaaday sidii gabadh weyn, sida wiil yar, taas oo aan aniga i caawinaynin.
“Waxay keentay in kaadh la isiiyo oo aan seego finalka, laakiin maan garanayn inaan finalka ciyaari doono. Waxa nooga soo horreynayay ciyaaro waaweyn. Guushii aanu ka gaadhnay Spurs ee koobka aanu ku qaadnay, Finalkii FA Cup oo Sabtida xigtay ahayd iyo finalka Champions League.”
Paul Scholes waxa uu ka warramay sida kaadhka uu qaatay ciyaartaasi uu dhibaatada nafsiga ah ugu keenay, waxaanu yidhi: “Waan ka murugooday inaan seego, dabcan waan murugooday. Roy ayaa isaguna sidayda oo kale ahaa.
“Laakiin macno ma leh ciddii maqnaatay, waxaanu wali haysanay koox awood leh, waxaana booska buuxin karayay ciyaartoy kale, waxaanay ahayd in kaliya aanu si fiican shaqadayada u qabano.”
Inkasta oo finalka Champions League ay seegeen ciyaaryahanno wanaagsan, haddana Manchester United waxay awood u yeelatay in waqtigii dhimashada ay ku garaacdo Bayern Munich.
Terry Sheringham ayaa daqiiqaddii 91aad u dhaliyey gool, ka hor intii aanu Ole Gunnar Solskjaer dhalinin goolka guusha laba daqiiqadood kaddib.